Tanya Tereshina - imodeli imfashini, umculi odumile, futhi ngesikhathi esifanayo inkosikazi enothando umama emangalisayo. umsebenzi wakhe Kwakungelula, kodwa ithalente omkhulu, ubuhle, ukuzikhandla nokuzidela wasiza Thane ukuthola ukubizwa kwakhe.
Tanya Tereshina ozalwa ngoMeyi 3, 1979 e-Hungary. Wakhulela emkhayeni lamasosha, udumo esizayo ibihamba nabazali bakhe emadolobheni ahlukene kanye namazwe.
Ngo-1992 Tereshina kuhanjiswe ku yokuhlala unomphela ngo Smolensk, lapho uTanya athola imfundo yesibili. Kwaba kakade kucace ngaleso sikhathi ukuthi intombazane nje ezimiselwe ukwenza enkundleni. Kunemibala futhi kwezobuciko, yena sasisempini ballet, zomculo nezikole kwezobuciko.
Ngo-1996, uTanya Tereshina, wangena Faculty of Painting, it is ukutadisha Smolensk Institute of Arts. Ngemva kokuphothula ngempumelelo esikoleni esiphakeme waya enhlokodolobha.
Iminyaka yokuqala enhloko-dolobha
E-Moscow, uTanya uzama yena ibhizinisi yokumodela. Embhalweni olandisa izinkanyezi ikusasa show ibhizinisi ngokubambisana neNhlangano enjalo owaziwa imodeli ejensi anjenge "Fashion", "Point" futhi "munye Vivendis".
Ukuba imodeli, Tereshina nengxenye imibukiso, eyayiqhutshwa emazweni ahlukahlukene aseYurophu, kanye izinkanyezi ku izimakethe eziningi lathatha nomagazini ahlukahlukene. Ngokusho kwakhe, wathola injabulo ezingenakulinganiswa kusukela ehamba phezu catwalk.
umsebenzi Early. Iqembu Hi-Fi
Tereshin ukuphila isishintshile kakhulu ngo-December 2002, lapho le nkosikazi yanquma uzame esandleni sami, ngekubamba lichaza ukulahlwa ukhetho eqenjini Hi-Fi. Indawo zitholakala emva iqembu kwesokunxele Oksana Oleshko, ababefuna ngithi goodbye kuya nemboni yezikaqedisizungu. Ukubamba iqhaza Ukukhetha, uTanya Tereshina ukungabaza ukuthi kungaba winner. Kodwa, naphezu kwalokho, we ababeqhudelana eziningi, ngakhetha uHelen.
Tatiana aseqala njengengxenye ithimba ethandwa ngo-February 2003. Tereshina waqala kakade ukuqonda ukuthi ngaphakathi leli qembu owawuholela kwelinye ikamelo elincane ngoba ukugcwaliseka yayo egcwele. Nokho ezingaphezu kuka kweminyaka emibili yena abonakala Timofeem Pronkinym futhi Mitey Fominym. Bekanye Hi-Fi uTanya uye wahlanganyela amakhonsathi abangaphezu kwamakhulu amahlanu eyayisemadolobheni ahlukene of Russia.
Ngemva ezifana umkhuba cwe uTanya Tereshina waqaphela ukuthi manje abakwazi ukuphila ngaphandle scene. Ngokushesha, iqembu won ukuqokwa "Dance iqembu Kuhle" ngokuvumelana isiteshi se-TV MUZ-TV. Le mpumelelo nakanjani babe ingxenye enkulu umnikelo uTanya sika.
Ngo-2007, uTanya Tereshina ushiya Hi-Fi enquma ukwenza i-career solo. umculi Ethi, ukunakekelwa wakhe yayingakuthinti ubudlelwane nozakwethu on abasebenzi, baba njengotshani nobungane njengakuqala.
Eyokuqala "kuyimizamo yokuvusa amandla lokubhala" UTanya kwakuwukuphela kwengoma "Kushisa," futhi esingu amavidiyo wakhe inkanuko samanje ngempumelelo "twist" kule lwasekhaya iziteshi emoyeni umculo TV. Yemvelo ubulili Tereshin futhi okubabayo imiculo Oriental wenza umsebenzi omuhle: ngokushesha mayelana umculi kukhulunywa ngalo njengoba inkanyezi yangempela, kuvele ugajwe amathuba photoshoots abahleli Journal zabesilisa. Tanya Tereshina, izithombe ngiphuphe ukuthola zonke izintatheli, ngomzuzwana sibhekene nenkazimulo enkulu.
Kodwa ngesikhathi esifanayo owodwa "Lizakubalela, 'kwakumane nje kuyisiqalo, elikhanyayo, kodwa isinyathelo embi. Lokhu Tereshina wavula ngemva kwesikhashana, lapho kukhululwa iculo elithi "I bhasi izinzwa." Lena izinkanuko kakhulu, ithenda kanye nokusungulwa enhle, nombhali embhalweni - onekhono Ivan Alexeyev, kangcono ukwaziwa ngegama lakhe elithi esiteji Noize MC. Ingoma ngokushesha waba ishayise owawuse izinyanga eziyisithupha ku iziteshi top ten ezinkulu Russian umculo emsakazweni.
Ukuthandwa lokhu olulodwa ekwindla ka 2008 wacosha ingoma "Amaphuzu phezu i», eba isihloko ukuhlukana kwabo kunzima nezinezinhlekelele namanje onothando izinhliziyo nomunye. Ividiyo ngale ngoma, wathwebula umqondisi odumile Estonia Maasik waqala e bukhoma iziteshi umculo ekupheleni kuka-2008.
Ngemva konyaka, uTania inikeza uzakwabo uJeanne Friske esiteji ndawonye ukuhlabelela ingoma ebizwa ngokuthi "Western" futhi inkanyezi kuvidiyo. Friske like Ukwakheka kanye nomqondo ividiyo, kodwa ngoba umculi bavumelana. Ngokusho umqondo umqondisi sika uTanya Tereshina futhi Zhanna Friske avele phambi ikhamera in isitayela Hollywood ubuhle 50s. Ividiyo, like ingoma, kule minyaka embalwa edlule, athandwa kakhulu. Ngo-2010 Tereshina waloba ividiyo for the olulodwa "Radio Gaga-ga", lapho uvela phambi izilaleli ngesimo Lady Gaga, le Flamboyant Umculi waseMelika. Ngale ngoma, uTanya Tereshina yethulwa ngo esigabeni "Creative Yonyaka" Prize RU.TV 2011 kodwa wakwazi ukuthatha indawo yesibili, ukulahlekelwa ukuze Quest Pistols. Ngo-2011 Tereshina kudedela aseqala solo albhamu enesihloko esithi "Vula inhliziyo yami", ehlanganisa amathrekhi 20.
Tatiana - kuyinto umculi abanamakhono hhayi kuphela, kodwa futhi umfazi onakekelayo futhi umama onothando. Tanya Tereshina futhi Slava Nikitin okujabulisayo ndawonye iminyaka engaphezu kwemibili. abantu abasebasha bahlangana emcimbini elalinikezelwe lokuzalwa kwesiteshi RU TV. Ngokusho UTanya, Siyabonga incendiary idansa babenza kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele, ezama ngazo zonke izindlela ukuze nidonse ukunaka. NoThereshi Ungabuyiseli falling in love nje kuye lapho uqala i-ikhono nijabula iletha futhi engasenathonya.
On Day Valentine ngo-2013 Inkazimulo okuphakanyiswe isandla yakhe ayithandayo futhi inhliziyo. Nokho, ngemva kokufunda kwalokho okuseduze Nikitin futhi Tereshina akazange adlale lomshado, futhi yanquma ukuthola okwengeziwe bayihlehlise unomphela.
Tanya Tereshina wabeletha Disemba 27, 2013, wazalelwa ingane emangalisayo, ukukhula 52 cm kanye isisindo 3600 yaqanjwa ngokuthi Tiny enhle igama engavamile aris, onesifo proiskhozhdenie.Tanya zamaJuda namaRoma futhi Inkazimulo kuze kube ngomzuzu wokugcina wayengazi ukuthi ungubani bona ozozalwa, ngoba ngaso sonke isikhathi ngaphambi othola ultrasound bacela odokotela ukuba ushayele ubulili wengane. abazali Ngenhlanhla abasha awapheli.
Lapho kuxoxwa naye Tereshina libike ukuthi kakhulu amaphupho amawele, enendawo yofuzo kuso. Ngakho mhlawumbe, esikhathini esizayo esiseduze kuyoba izindaba mayelana nokukhulelwa entsha Thani.
Tanya Tereshina - elikhanyayo, umculi okungavamile omsebenzi wakhe uyawuthanda ukuthandwa okukhulu.
Popular intsha isitayela rock indie
Ukulawula esigxotsheni nokuhlola zabo